Lahateny fanolorana ny Tatitra mahakasika ireo asa fanatanterahana ny Politika ankapoben'ny Fanjakana – Antenimierandoholona | Primature
23 juin 2020 30 mars 2021
Andriamatoa Filohan’ny Antenimierandoholona
Ramatoa sy Andriamatoa isany Loholon’i Madagasikara
Raisiko an-kafaliana hatrany ny fandraisana fitenenana eto anatrehanareo araka ny fotoana nifanomezana ka hanolorako ny tatitra mahakasika ny firoson’ny Fandaharan’asa ho fanatanterahana ny Politika ankapoben’ny Fanjakana (PGE).
Noho ny fahasoavan’Andriamanitra dia tafahaona soamantsara tokoa isika anio na dia eo aza ny mbola iainana ny valan’aretina Covid-19 amin’ireo Distrika maromaro eto amintsika. Ny Governemanta manontolo sy ny tenako dia miara-ory amin’ny fianakavian’ireo namoy ny ainy noho ny valan’aretina ary mirary fahasitranana haingana sy feno ary lavitry ny tebitebin-tsaina ho an’ireo izay mbola tsaboina.
Mankahery hatrany ny fianakaviamben’ny mpiasan’ny fahasalamana ary ny mpitandro filaminana ny tenako amin’ireo ezaka manokana asehon’izy ireo amin’izao fotoam-pahamehana ara-pahasalamana izao.
Manantitra ny fiarahabana sy ny fisaorana ny vahoaka Malagasy tsy vakivolo hatrany ny tenako, amin’ny anaran’ny Filohan’ny Repoblika, Andriamatoa Andry RAJOELINA, amin’ny fitoniana, ny fahendrena ary ny fitiavan-tanindrazana asehontsika manoloana ny olana aterak’izao fahamehana ara-pahasalamana izao izay nanomboka tokoa tamin’ny faha-21 marsa 2020. Mariky ny fitandroana sy fandalàna ny firaisam-pirenena izany, mariky ny fahamatorana misy eo amin’ny vahoaka Malagasy izany, mariky ny fandraisana andraikitra ihany koa eo amin’ny tsirairay izany, koa iriko ny hitohizan’izany, indrindra amin’izao ankatoky ny fankalazantsika ny faha-60 taona ny niverenan’ny fahaleovantena izao ary ny amin’ny fiatrehana ny ho avy ihany koa.
Farany kanefa tsy kely indrindra dia tsy haiko ny tsy hisaotra eto anoloanareo an’Andriamatoa Andry RAJOELINA, Filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara, amin’ny fijoroany sy ny fitarihany ny vahoaka Malagasy amin’ny ady amin’ity valan’aretina Coronavirus ity, ary ny fanohizany ny ezaka hanenjehana ny fahataran’ny fandrosoan’ity Madagasikara mamintsika ity.
Araka ny fomba fitantanana repoblikana sy demokratika dia entinay eto anatrehanareo ny tatitra momba ireo asa lehibe notontosaina tamin’iny taon-dasa iny ary ihany koa izay vinavinan’asa amin’ity taona 2020 ity ho fanatanterahana ny Politika Ankapoben’ny Fanjakana izay natolotra teto anoloanareo ny faha-20 aogositra 2019.
Efa tonga teto tokoa izahay Governemanta manontolo ny Talata faha-2 jona lasa teo ary nandalo tsirairay teto ihany koa ny mpikambana ao amin’ny Governemanta araky ny nandaharanareo azy. Handravona ny ezaka rehetra vita ny tenako ary hanazava ihany koa amin’ny ankapobeny ny fandaharan’asa amin’ity taona 2020 ity.
Izao tatitra izao dia notsinjaraina ho efatra lehibe dia : (i) Ny lafiny Fitantanana, (ii) Ny lafiny Filaminana sy Fandriampahalemana, (iii) Ny lafiny Toe-karena sy ny fotodrafitrasam-pamokarana ary (iv) Ny lafiny Sosialy.
Ny lafiny Fitantanana
Ny ady amin’ny kolikoly dia natao laharampahamena hatrany. Niezaka ny Governemanta nampiseho fa tsy tokony ekena intsony ny “tsy maty manota”. Hita taratra izany tamin’ny fandraisana andraikitra hentitra manoloana ireo mpitandro filaminana izay tratra nanao ny asa ratsy sy ny asan-jiolahy.
Ny fandrindrana ny asam-panjakana rehetra dia natao tao anatin’ny mangaraharaha amin’ny alalan’ny fametrahana sy fanaraha-maso ny fampiasana ny fototra tsy miova na “standards de service” eo anivon’ny sampandraharahan’ny asam-panjakana rehetra, ka nampiharina tokoa ny lalàna mahakasika ireo olona izay nahiana ho nanao kolikoly ary hita fa efa nihena izany eny amin’ireny sampan-draharaham-panjakana ireny na dia mbola betsaka aza ny ezaka tokony hatao.
Ny fangaraharana dia napetraka ihany koa eo amin’ ny tsenam-baro-panjakana ka mbola hamafisina ny fanaraha-maso ny fitantanana ny tsenam-baro-panjakana manerana ny nosy amin’ny alalan’ny fametrahana sy fampiharana ny “mercuriale des prix” ary indrindra ny fitsirihana ny kalitao ny asa vita rehetra.
Momba ny paikady amin’ny “E-gouvernance” hanatsarana ny fampandehanana ny asa rehetra dia efa ampiasaina amin’izao fotoana izao ny rindrambaiko “AUGURE” itantanana ny mpiasam-panjakana.
Nohatsaraina ny fitantanana sy ny fanaraha-maso ny kara-panondrom-pirenena misy eto amintsika. Torak’izany ny fampiasana ny teknolojia vaovao amin’ny fanovana ny fahazoan-dàlana mitondra fiara ho “biométrique” sy ny taratasy momba ny fiara voaaro tanteraka na “Carte grise sécurisée”, izay efa natomboka eto an-drenivohitra sy any amin’ny renivohi-paritany 5 eto Madagasikara.
Mba hiadiana amin`ny kolikoly mihatra amin`ireo tantsaha sy mpiompy ambanivohitra, dia efa narafitra ny volavolan-didim-pitondrana momba ny fampitoviana ny vidin`ny FIB sy ny bokin`omby izay vinavinaina hivoaka tsy ho ela.
Manamafy ny fahavononana hanatsara ny fitantanana ihany koa ny nanaovana fifaninanana ho Inspecteurs d’Etat tamin’ny taona 2019 lasa iny. 17 no isan’ireo voaray tamin’izany ary efa mandray asa izy ireo ankehitriny. Ny tanjona dia ny ahafahana mampitombo ny fanadihadiana sy ny fitsirihina ny fampiasam-bolam-panjakana eny anivon’ireny sampandraharaha maro samihafa ireny.
Eo amin’ny fitsijaram-pahefana sy ny fampandraisana andraikitra ny vondrom-bahoakam-paritra dia natomboka tamin’ny volana Jolay 2019 ny fanomanana lalàna tena mirakitra ireo fenitra momba izany.
Natomboka ny fanendrena ireo Governora any amin’ny faritra 13 eto amintsika. Tsy ho ela intsony ny fanendrena ny ambiny. Novatsiana vola mitentina 1 miliara Ariary ny isam-paritra tamin’ny taona 2019 ka nahafahana nanomboka fotodrafitrasa maro toy ny làlana, ny tetezana, ny tsena, ny biraom-panjakana tany amin’ny Faritra efa nisy Governora. Ny vola ho an’ny Faritra izay mbola tsy nisy Governora kosa dia efa nalefa manontolo any amin’ireny Faritra ireny eo ampiandrasana ny fanendrena azy ireo. Mitovy lanja ny vola natokana ho an’ny Faritra rehetra.
Amin’ity taona 2020 ity, ankoatra ny vola mitentina 2 miliara ariary isam-paritra hatolotry ny fitondram-panjakana ho fanatanterahana foto-drafitr’asa mifandraika amin’ireo filàna eny ifotony toy ny làlana, dia ho vatsiana fitaovana enti-manamboatra làlana koa izy ireo tsirairay avy, toy ny bull, Compacteur, Chargeur, Niveleuse, Camion arroseur.
Anisan’ny fiovana goavana hatomboka amin’ity taona ity ny famindrana ny fitantanana ny tsenam-baro-panjakana ho any amin’ny Faritra toy ny fananganana sekoly sy tsena ary biraom-panjakana isan-karazany. Ka any amin’ny Faritra no hatao ireo fitaomana ny tolo-bidy anatiny isan-karazany (Appels d’offre) mba ho tena tompon’andraikitra amin’ny fampandrosoana ireo any amin’ny Faritra. Izany dia mba ahafahan’ireny orinasa madinika sy salantsalany tsy miankina ireny any amin’ny Faritra mba mandray anjara amin’ireny tolo-bidim-panjakana ireny.
Mbola mitohy amin’ity taona ity ny fivorian-dehibe isam-paritra momba ny teti-bolam-panjakana ahafahana manome lanja ireo tena laharam-pahamehana sy ny filàna amin’ny fampandrosoana, mba ahazoana mamaritra mazava ireo teti-bolan’ny Faritra.
Efa fantatsika fa vita tamin’iny taona 2019 iny ihany koa ny fifidianana Solombavam-bahoaka sy ireo Ben’ny Tanàna ary ny Mpanolo-tsain’ny Tanàna. Misy Kaominina vitsivitsy izay tokony namerenana ny fifidianana saingy nifanindry amin’izao fotoanan’ny hamehana ara-pahasalamana izao ka tsy maintsy ho ataontsika amin’ny fotoana mahamety azy izany.
Tohizana ny famatsiam-bola eo amin’ny CLD ary hitondrana fanatsarana ny rijanteny mifehy manokana ny CLD mba hampahomby azy bebe kokoa.
Eo amin’ny fampitaovana ny Kaominina dia fiara vaventy mpandraoka fako miisa roapolo amby zato no novidiana tamin’ny taona 2019 ary efa maro ny tanàn-dehibe manerana ny Nosy efa misitraka an’izany ankehitriny. Manampy amin’ny fanadiovana tanàna izy ireny ary tena mankasitraka izany ny vahoaka.
Amin’ity taona 2020 ity dia ezaka maro no entina hanampiana ny vondrom-bahoaka itsijaram-pahefana manerana ny Nosy. Izany dia mahakasika ireto zavatra manaraka ireto :
Fametrahana ny Komity Loharano manerana ny Nosy.
Fitohizan’ny fananganana biraon’ny kaominina andrenivohitra miisa roapolo.
Fitohizan’ny fananganana biraon’ny kaominina any ambanivohitra miisa telopolo.
Fananganana biraom-paritra ny BNGRC any Mahajanga sy Toamasina.
Fananganana birao ho an’ny distrika miisa sivy.
Fanarenana ny toeram-ponenan’ny Lehiben’ny distrika 14 any Maintirano, Antsalova, Fenoarivobe, Manja, Amboasary, Tsihombe, Beloha, Ambovombe, Manjakandriana, Nosy Be, Ambositra, Vohibato, Manandriana ary Isandra.
Fanarenana ny biraom-piasan’ny Préfectutre miisa roa amby ny folo any Sainte-Marie, Nosy Be, Ambatondrazaka, Antsirabe I, Tsiroanomandidy, Toliara, Antsiranana I, Manakara, Fianarantsoa I, Mananjary, Morondava ary Ambositra.
Fanamboaran-dalana any amin`ny faritra 22 ka folo kilometatra farafahakeliny isam-paritra.
Fanamboarana tsena manarapenitra amin`ny Faritra 12.
Fananganana efitrano fianarana 6 isanisany any amin`ny Faritra 10.
Momba ny fanatsarana ny fikirakirana ny antonta-taratasy maha mpiasam-panjakana. Ankoatra ny fametrahana sy fanaraha-maso ny fampiasana ny fototra tsy miova na “standards de service” ary ny fametrahana ny rindrambaiko « AUGURE » voalaza teo aloha dia tsara tsindriana fa novàna ny fomba fiasa amin’ny famoahana ny « équivalence administrative » izay tsy miandry ela intsony fa vita eo noho eo.
Ankehitriny dia misy ny fiaraha-miasa eo amin’ny Ministera telotonta (MTEFPLS, MEF, MENETP) ka napetraka ny « guichet unique » amin’ny fikarakarana ny antontan-taratasin’ireo Mpampianatra FRAM ampidirina ho mpiasam-panjakana raikitra.
Momba ny fandraisana sy fanofanana ny mpiasam-panjakana dia mitohy ny fanofanana ho mpiasam-mpanjakana, ka vita tamin’ny volana Aogositra 2019 ny fifaninanana, andiany faha-29, hidirana eny amin’ny toeram-panofanana ho mpiasam-panjakana INFA (Institut National de la Formation Administrative) izay efa niditra tamin’ny volana Janoary 2020 teo. Toy izany koa ny eo anivon’i ENAM ka mbola misy manohy fiofanana eny ankehitriny, na ny eo amin’ny “formation initiale” na ny “formation continue”. Farany, nandeha tsara ny fizotran’ny fifaninana idirana tao amin’ny Polisim-pirenena, Zandarimariam-pirenena, Institut National des Statistiques, Inspection Générale de l’Etat, araka ny fiaraha-miasa telotonta dia MTEFPLS, BIANCO ary ny Departemanta voakasiky ny fifaninanana.
2. Ny lafiny Filaminana sy Fandriampahalemana
Anisan’ny nitaky ezaka lehibe tamintsika ny fanatsarana farak’izay haingana ny filaminana sy ny fandriampahalemana teto amin’ny Firenena. Novolavolaina araka izany ny tetika hamerenana ny fahefam-panjakana sy ny fifampitokisana eo amin’ny vahoaka sy ny mpitandro filaminana. Nentina ny fandaminana mifanaraka amin’izany ka nasiana fiovan-drafitra ny teo amin’ny Tafika Malagasy, ny Zandarimariam-pirenena ary ny Polisim-pirenena. Natsaraina ihany koa ny fitaovana ary nanorenana toby araka izay nilana azy isan-tsokajiny avy izy ireo.
Novatsiana fiaramanidina fitaterana CASA iray, fiaramanidina kely CESSNA dimy, angidimby efatra, fiara tsy mataho-dalana 140 ary moto amam-polony maro izy ireo ny taona 2019.
Natsangana teo anivon’ny Tafika Malagasy ny:
Faritra Ambanivohitra mitaky fandriampahalemana maika (Zones Rurales Prioritaires de Sécurité na ZRPS) miisa efatra.
Beholafy Mpiaro Atomotra (Bataillon Opérationnel Avancé – BOA) dimy, ka nanorenantsika toby ao Tsaratanana, Iakora, Morafenobe, Ambatofinandrahana ary Ankilizato. Manodidina ny 15% hatramin’ny 90% ny fahavitan’ny asa amin’izany.
Andiany Mpiaro Manokana (Détachement Spécial de Sécurité – DSS) miisa efatra ao Vondrozo, Amboasary-Atsimo, Befotaka ary Ambohimahasoa.
Fanamboarana Base réduite tao Mananjary sy Farafangana.
Fanatsarana sy fanarenana fotodrafitrasa maro eo anivon’ny Tafika Malagasy manerana ny Nosy.
Fari-dranomasina roa no napetraka ho arovana avy hatrany (Zone Maritime Prioritaire d’Intervention – ZMPI) dia ny Avaratra Atsinanana sy Atsimo Andrefana hiadiana amin’ny fanondranana an-tsokosoko ny harem-pirenena.
Eo anivon’ny Zandarimariam-pirenena dia :
Natsangana ny toby miisa enina ho an’ny Centre Spécial d‘Aguerrissement Operationnel na CSAO ao Malaimbandy, Beroroha, Beravina, Ranotsara Atsimo, Andriamena ary Imanombo.
Efa tafapetraka ihany koa ny Tobim-paritra manaramaso ny ranomasina (Postes de surveillance nautique) roa ao Tanjona (Mananara Avaratra) sy Manantenina (Taolagnaro).
Efa vita ihany koa ireo Brigade Routière Spéciale eny anivon’ny Faritra Fialan-tsasatra Voaaro (Aire de repos sécurisée) telo ao Sahamamy RN2, Ambalamanakana RN7 ary Analakininina RN34.
Ho an’ny Polisim-pirenena, dia toy izao ny ezaka natao:
Sampan-draharaha-paritry ny filaminam-bahoaka sy trano fonenana ho an’ny tompondrakitry ny sampam-paritra folo no natomboka ao Ihosy, Maevatanana, Tsiroanomandidy, Antsirabe, Taolagnaro, Manakara, Ambositra, Antsohihy, Farafangana ary Fenoarivo Atsinanana. Efa vita 100% ny enina ary mamarana asa ny efatra.
Vita koa ny Kaomisarian’ny Polisy vaovao roa ao Ambohimahasoa sy Vondrozo.
Eo amin’ny lafin’ny filaminana sy ny fandriampahalemana dia singanina manokana ihany koa ireto vokatra ireto :
Tratra ireo jiolahy anisan’ny nokarohana nandritry ny fotoana lava ary nalaza tamin’ny fakàna ankeriny na kidnapping
Efa tsy maheno firy intsony koa isika ny amin’ny fandrobana mitam-piadiana sy fanafihana taxi-brousse amin’ny faritra maro manerana ny Nosy
Natao ny fandravana ny fambolena rongony tao Andriry
Fanampiana tamin’ny famonjena ireo trà-boina nateraky ny tondra-drano
Ireo faritra mena izay tsy voavakin’ny mpitandro ny filaminana hatramin’izay dia ahitana taratra amin’izao fotoana izao ny fipetrahan’ny fahefam-panjakana, toy ny any Mahazoarivo Isandra, Ankazoabo, Iakora, Vondrozo, Tsaratanana, Ambato-boeny, Ambalankindresy, Ambatofinandrahana, Andriry sy ny sisa tsy voatanisa
Nihena 24% ny halatr’omby, nihena 49% ny omby very, basy tsy ara-dalana iraika amby ny folo sy valon-jato (811) no azo tamin’ny toerana maro any ambanivohitra ary maherivaika ny 31 tamin’izany
Aty an-drenivohitra dia basy miisa folo amby zato (110) no azo ary bala dimy amby sivifolo sy efa-jato (495) no niaraka taminy
Taolam-paty milanja valo amby roapolo sy roan-jato (228) kilao no sarona nandritra ny taona 2019
An-jatony kilao maro ireo vatosoa nokasaina aondrana an-tsokosoko no tratra, indrindra fa teny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato sy Nosy-Be
Tera-tany vahiny efapolo sy roan-jato (240) no naverina hody any aminy teny am-pahatongavana ary dimy amby dimapolo (55) no noroahina, dimy amby efapolo sy roan-jato (245) ireo tsy manana taratasy ara-dalàna ipetrahana eto ka naverina any aminy.
Ireo tarehimarika ireo dia entina anehoana fa mamerina ny fanajana ny lalàna ary ny fifampitokisana isika mba hampandriana fahalemana ny tany ka ahafahan’ny mpiray tanindrazana miaina sy mihary lavitry ny tebitebin-tsaina.
Raha ity taona 2020 ity no banjinina dia ho tohizantsika ny ezaka hanamafisana ny filaminana sy ny fandriampahalemana manerana ny Nosy. Atao ho laharampahamehana ny fanatsarana ny paikady entina manatevina ny ady amin’ny asa ratsin’ny jiolahy, ny dahalo, ny tambazotran’ny mpaka ankeriny, ny mpandroba ny harem-pirenena.
Hohatsaraina hatrany ny fomba fiaraha-miasa eo amin’ny mpitandro filaminana telo tonta dia ny Tafika Malagasy, ny Zandarimariam-pirenena ary ny Polisim-pirenena.
Tohizana ny fampitaovana ny mpitandro filaminana eo amin’ny lafiny maro, ka santionan’ny ezaka hatao amin’ity taona 2020 ity ireto tanisaina manaraka ireto:
Eo amin’ny Tafika Malagasy, hifototra amin’ireto laharam-pahamehana ireto ny ezaka hatao :
Hatomboka ny fanamboarana ny BOA amin’ireto toerana dimy ireto dia Isandra, Andriry, Ankazoabo-Atsimo, Kandreho ary Miandrivazo.
Hajoro ny DSS amin’ireto Distrika enina ireto ihany koa: Anjozorobe, Mandritsara, Soalala, Vangaindrano, Mitsinjo ary Vohipeno.
Hisy ihany koa ny fampitaovana maro isankarazany ho an’ny Tafika Malagasy.
Eo anivon’ny Zandarimariam-pirenena dia toy izao ny ezaka hotanterahana amin’ity taona 2020 ity :
Fananganana CSAO roa dia any Andriamena (Tsaratanana) ary Andimaka-Manambolo (Belo sur Tsiribihina).
Fametrahana Compagnies roa dia ny ao Ikalamavony sy Amboasary Atsimo.
Brigades fito no hoforonina any Mahazoarivo (Isandra), Marolinta (Beloha), Androka (Ampanihy), Tranomaro (Amboasary), Maroalimainty (Ambovombe), Ikopoky (Beloha), Talata Vohimena (Manandriana).
Hatsangana toy izany koa ny BRS eo amin’ny Croisement Kiangara.
Miisa dimanjato (500) ny motos no aparitaka manerana ny Nosy ary fiara tsy mataho-dàlana valo (8) sy kamiao valo (8) no alefa eny amin’ireo CSAO.
Ho vatsiana fitaovana ihany koa ny mpiandry sisin-tany any Mananara Avaratra sy Taolagnaro.
Raha ny eo anivon’ny Polisim-pirenena dia toy izao ihany koa ny ezaka manokana hotanterahana amin’ity taona 2020 ity:
Hatsangana ny toeram-piasana iombonan’ny Polisim-pirenena DRSP amin’ny renivohi-paritra roa ambin’ny folo mbola tsy manana dia ny ao Ambovombe, Sambava, Morondava, Ambatondrazaka, Maintirano, Miarinarivo, Antananarivo, Toamasina, Fianarantsoa, Toliara, Mahajanga ary Antsiranana;
Hovatsiana fitaovam-piasana ireo DRSP folo efa natsangana tamin’ny taona 2019;
Kaomisarian’ny Polisy enina amby roapolo no atsangana amin’ireto renivohitry ny Distrika ireto : Iakora, Vohibato, Fenoarivobe, Anivorano-Avaratra, Brickaville, Beroroha, Anjozorobe, Ifanadiana, Sainte-Marie, Tsihombe, Ambohidratrimo, Midongy-Atsimo, Lalangina, Manja, Bekily, Betroka, Andranomanelatra, Ambato-boeny, Nosy Varika, Betafo, Betioky, Befandriana-Avaratra, Anosibe an’Ala, Befotaka-Atsimo, Antanambao Manapotsy, Mitsinjo;
Fiara tsy mataho-dalana miisa dimy amby roapolo ho an’ny Kaomisarian’ny Distrika, fiara vonjy taitra valo amby roapolo ho an’ny FIP amin’ny renivohi-paritany (Antananarivo, Toamasina, Antsiranana, Mahajanga, Fianarantsoa, Toliara) ary motos telon-jato no hozaraina manerana ny Nosy.
Marihina fa ireo fanorenana sy fampitaovana voatanisa rehetra aminareo ireo, izay ho tontosaina amin’ity taona 2020 ity, dia efa voarafaritra ao anatin’ny volavolan-dàlana mikasika ny teti-bolam-panjakana nasiam-panitsiana izay ho tonga ety anivonareo.
Mahakasika ny tontolon’ny Fitsarana dia vaindohan-draharahan’ny Governemanta ny fanamafisana fototra ny tany tan-dalàna izay tsy maintsy mandalo amin’ny famerenana amin’ny hasiny ny Fitsarana sy ny tontolony. Izany no atao dia mba ho fiarovana ny vahoaka sy ny fananany.
Ny tanjona ho tratrarina indrindra ihany koa dia ny fametrahana ny Fitsarana manakaiky ny vahoaka sy mba ho fanajana ny zo fototr’ireo voafonja. Raha tsiahivina dia miisa fito arivo sy roa alina (27.000) amin’izao fotoana izao ny isan’ireo voafonja. Ny fahafaha-mandray ananantsika nefa dia arivo sy iray alina (11.000) monja.
Manarina izany rehetra izany isika. Ka tamin’ny taona 2019 dia:
Natomboka ny fananganana fonja vaovao amin’ireto toerana sy Distrika ireto: Imerintsiatosika (Fonja lehibe ho vita amin’ity taona ity), Sambava ary Fianarantsoa.
Nisy ihany koa ny fanavaozana fonja tao Moramanga, Ampanihy ary Manjakandriana.
Natsaraina sy navaozina ihany koa ny fidirana eo amin’ny Tribonaly Anosy Antananarivo mba iadiana amin’ireo mpisoloky sy mpijirika maro nisy teo amin’izany toerana izany.
Natomboka ny fanorenana tribonaly ambaratonga voalohany tao Antananarivo Avaradrano.
Amin’ity taona 2020 ity dia :
Dimy ny fitsarana ambaratonga voalohany izay hatsangana eto amintsika dia ny ao Besalampy, Sainte-Marie, Ambilobe, Sambava, Belo sur Tsiribihina.
Fonja lehibe (Maisons de force) roa no haorina natokana ho an’ireo mpanao asa anterivozona sy ireo dahalo rain-dahiny dia ny any Tetezambaro (Toamasina) sy Ikelivondraka (Ihosy).
Enina ny fonja (Maisons centrales) hatsangana any amin’ny distrika samihafa dia Sainte-Marie, Belo sur Tsiribihina, Amboasary-Atsimo, Antananarivo-Avaradrano, Fenoarivo-Atsinanana, Ambositra.
Vatsiana fiara manokana hitaterana voafonja sy fiara vonjy taitra (Véhicule cellulaire, véhicule d’intervention rapide) ny fandraharahana ny fonja.
3. Ny lafin’ny Toe-karena sy ny fotodrafitrasam-pamokarana
Eo amin’ny tontolon’ny toe-karena sy ny fitantanam-bola dia miatrika ny fiantraikan’ny valan’aretina Coronavirus ny eran-tany ary ao anatin’izany isika eto Madagasikara. Fantatra fa nihena dia nihena ny fidiram-bolam-panjakana nohon’ny tsy fiodinan’ny toekarena ka nampihena ny hetra, ny haba ary ny vola miditra avy amin’ny fadi-tseranana. Hitombo noho izany ny tambatry ny fahabangana ankapobeny eo amin’ny teti-bolam-panjakana ka hahatratra hatramin’ny 6,3%-n’ny harikarem-pirenena amin’ity taona 2020 ity.
Raha ny harinkarena faobe no resahana dia hitontongana hatramin’ny 0,8% izy amin’ity taona ity kanefa novinavinaina ho 5,5% tamin’ny teti-bola fiatombohana 2020 (LFI 2020). Hofehezina anefa ny fiakaran’ny vidim-piainana mandritra ity taona ity mba tsy hihoatra ny 7%.
Noho izany rehetra izany ny Governemanta dia tsy maintsy manitsy ny zotram-pandaniana eo amin’ny tetibolam-panjakana ka afantoka tanteraka amin’ny sosialim-bahoaka sy ny fanarenana ny toe-karena ny laharam-pahamehana.
Eo ankilany, ny fitondram-panjakana dia hametraka drafi-pirenena goavana izay hifantoka amin’ny famporisihana ny fampiasam-bola eto amintsika.
Eo andaniny kosa, ny Drafitra marolafy hiatrehana ny hamehana (Plan Multisectoriel d’Urgence na PMDU) dia hijerena manokana ny sehatry ny fampivoarana ny fotodrafitrasa sy ny fampihetsehana an’ireo mpiaramiombon’antoka mba hametrahana sy hanamorana lalam-bola manokana ho an’ireo orinasa bitika, madinika ary salantsalany. Izany dia hiarahana amin’ny rantsamangaikan’ny fanjakana toy ny Banky Foiben’i Madagasikara sy ny Programan’asa Fihariana. Hojerena ihany koa ny famporisihana ny mpanjifa hisitraka ny vita Malagasy ary hampiana ny sehatra tsy miankina eo amin’ny lafiny fampahafantarana ny vokatra eo amin’ny tsena iraisampirenena.
Fanampiana entina ho an’ny sehatry ny fandraharahana daolo izany rehetra izany izay arahina fepetra hafa koa noraisina indrindra eo amin’ny lafiny ara-ketra ara-tsosialy toy ny :
– Fampiatoana ny fandoavana ny « acompte provisionnel »n-ny IR, IRSA, TVA sy fanemorana amin’ny faha-15 aogositra 2020 ny fanambarana fandoavana (déclaration de paiement) ho an’ ireo izay amin’ny sehatry fizahantany, ny fifamoivoizana anabakabaka ary ny orinasa afakaba
– Fanemorana fandoavana hetra tambatra (Impôt synthétique) ary ny fanambarana fandoavana hatramin’ny 15 aogositra 2020
– Fampiantona ny fanarahamaso ny hetra sy « avis aux tiers détenteurs na ATD » hatramin’ny 15 aogositra 2020
– Fanomezan-dalana ny fampodiana ny vola vahiny (rapatriement de devises) hatramin’ny 80% ka tsy misy sazy
– Fifanarahana amin’ny fandoavana ny latsakemboka sosialy tamin’ny telo volana voalohany sy telo volana faharoa.
Farany, eo amin’ny fitantanana ny raharaham-panjakana eo anivon’ny Ministeran’ny Toe-karena sy ny Fitantanam-bola dia :
Hatsangana ny “Hôtel des Finances” dimy dia any Mahajanga, Antsiranana, Fianarantsoa, Toliara ary Taolagnaro. Marihina fa ny any Sambava dia efa andalam-pahavitana ankehitriny.
Hatomboka ny fanamboarana ny Perception Principale ao Betroka.
Harenina ny Trésorerie Principale ao Mananjary sy Ifanadina.
Hamboarina ny Circonscriptions financières dimy dia ao Anosibe an’Ala, Marolambo, Befotaka, Ambatomainty, Antsalova.
Eo amin’ny sehatry ny Harena ankibon’ny tany, ireto asa ireto no hapetraka ho laharam-pahamehana amin’ity taona ity :
BAM (Bureau d’Administration Minière) dimy no hatsangana any Miandrivazo, Antsohihy, Vohémar, Mananjary ary Tsiroanomandidy mba ahafahantsika mifehy bebe kokoa ny sehatry ny harena ankibon’ny tany.
Hapetraka ny fitaovam-pitiliana volamena sy vy ari-fomba eny amin’ny seranam-piaramanidina eny Ivato, Nosy-Be ary Toamasina.
Hatao ny fanorenana trano iombonana (Atelier communautaire) fanantanterahana asa momba ny vatosoa ao Antsirabe.
Hotohizana ny dinika eo amin’ny zotra-pandrafetana ny fehezan-dalàna momba ny harena ankibon’ny tany izay vinavinaina hovitaina tsy ho ela intsony mba ahafahana hitsinjo amin’izay ny tombotsoan’ny vahoaka, ny mpisehatra ary ny Fanjakana.
Eo amin’ny sehatry ny Fitaterana sy ny Fizahantany, efa maro ny asa natomboka toy ny:
Amin’ny fitaterana an-dalamby, ny asa fanamboarana ny tetezana ao Sahasinàka amin’ny zotra FCE.
Lohamasinina telo no efa tonga eto amintsika amin’izao fotoana izao ho hampiasaina tsy ho ela intsony any amin’ny FCE.
Amin’ny fitaterana an-tanety, dia eo am-pamaranana ny “Aire de sécurité, de service et de repos” na ASSR ao Ambalamanakana RN7 ary ny ao Ranomafana Atsinanana RN2, izay hotokanana amin’ity taona ity avokoa.
Eo am-pamitana ihany koa ny tobim-piantsonana fiara ao Vangaindrano isika.
Seranam-piaramadinina fito no afaka mandray sidina indray dia ny ao Manakara, Analalava, Antalaha, Antsirabe, Maintirano, Mananara Avaratra ary Vohémar.
Afaka mandray sidina amin’ny zotra nasionaly ihany koa ny seranam-piaramanidina ao Ambatondrazaka, Fianarantsoa ary Mananjary.
Efa vita tamin’ny volana Janoary 2020 ny fametrahana ny marika famantarana (balisage) ao amin’ny seranam-piaramanidina ao Taolagnaro. Mbola an-dàlana ny fifampidinihana sy ny fifanarahana amin’ny fitantanana (Concession ou contrat de gestion) momba ireo seranam-piaramanidina hafa toa ny any Antsiranana, Mahajanga, Toamasina, Toliara, Morondava ary Taolagnaro.
Eo am-panamboarana ny seranam-piaramanidina any Toliara sy Taolagnaro isika mahakasika ny famaritana ny faritry ny seranam-piaramanidina (limitation du domaine aéroportuaire).
Ankoatra izay dia eo am-pamaranana ny asa fanajariana ny Canal des Pangalanes avy any Toamasina ka hatrany Mananjary isika, mba hitondrana fanampiana amin’ny fampivelarana ny seha-pihariana amin’iny faritra iny manomboka amin’ity taona 2020 ity.
Santionany ihany ireo voatanisa ireo fa maro ny fotodrafitrasa sy paikady hoentina hampandrosoana ny fizahantany eto amintsika, hoentina hanatrarana ilay fanamby lehibe ahatongavan’ny mpizahantany dimy hetsy amin’ny taona 2023.
Amin’ity taona 2020 ity dia hanao ezaka goavana ny Governemanta amin’ny lafiny maro toy ny:
Ny famerenana amin’ny laoniny ny zotra an-dalamby eto amintsika ka hisy ny fanarenana toby fiantsonana an-dalamby enina any amin’ny FCE dia ny gares ferroviaires any Manakara, Fenomby, Manapatrana, Tolongoina, Mahabako ary Fianarantsoa.
Anisan’ny laharam-pahamehana ny fanamboarana ny seranam-piaramanidina any Bekopaka sy Ranohira mba hisintonana bebe kokoa ny mpizahatany.
Hosokafana amin’ny sidina iraisam-pirenena ny seranam-piaramanidina Andrakàka any Antsiranana.
Hamboarina ny “Aires de repos sécurisées” eo anelanelan’i Morondava sy Belo sur Tsiribihina ary eo anelanelan’i Belo sy Bekopaka, ny ao Miandrivazo ihany koa.
Hotohizana ny fanamboarana ny seranan-tsambo ao Soanerana Ivongo.
Hamboarina ny toeram-piantsonan’ny fiara mpitatitra telo amby ny folo dia ny ao Fianarantsoa, Manakara, Ambondromamy, Maintirano, Taolagnaro, Toliara, Toamasina, Vangaindrano, Sambava, Ambanja, Morondava, Antsirabe ary Ambositra.
Hiompana bebe kokoa amin’ny fampiroboroboana ny fizahantany anatiny ny paikady apetraka.
Hanampy tosika amin’ny fisarihana ny mpizaha-tany ny Masoivoho sy Kaonsilin’ny Madagasikara amin’ny alàlan’ny ny hetsika fampahafantarana maro samihafa.
Eo amin’ny lafin’ny fizahantany manokana, ampiana ny mpisehatra mba hanamorana ny asa fampahafantarana indray ny vokatra Malagasy any ivelany ka hiverenan’ireo mpizahantany aty amintsika rehefa vory ny fepetra rehetra ny amin’izany.
Eo amin’ny fampivelarana ny sehatry ny indostria sy ny varotra, natao ny ezaka mba ho fiarovana ny mpanjifa, indrindra nohon’ny fisian’ny valan’aretina. Natao tsy miato ny fanaraha-maso akaiky iantsorohan’ireo tompon’andraikitra ao amin’ny Ministera miadidy ny varotra manerana ny Nosy, amin’ireo vidin’ny entana eny an-tsena sy ny fisian’ny vary eny amin’ny mpamongady. Nandraisana fepetra hentitra ireo toerana misy vidim-bary niakatra tsy ara-dalàna.
Natomboka ny taona 2019 ny fanisana ny mpanao asa-tanana mba hampidirana azy ireo eo amin’ ny sehatry ny toekarena manara-drafitra. Karatra nomerika dimy alina sy iray hetsy (150.000 cartes) no tanjona isan-taona.
Efa miroso ny fananganana ireo Zone d’Emergence Industrielle na ZEI any Moramanga sy ny Zone d’Investissement Industiel na ZII any Itasy.
Ny fitondram-panjakana dia mikajy hatrany ny hahatsara ny kalitaon’ny lavanila izay hita fa tsy mitsahatra mitombo ny hatsarany satria raha 0,7 teo aloha dia 1,8 ny tahan’ny vanilline ankehitriny. Hanaovana ezaka manokana ny fanamafisana ny fandriampahalemana amin’ny seha-pihariana lavanila.
Hatomboka amin’ity taona 2020 ity ny fananganana ny ivotoerana lehibe any Antalaha “World of vanilla” hihaonan’ireo mpandraharaha sy hampivoarana ny fandraharahana amin’ny sehatry ny lavanila.
Hatomboka ihany koa ny fananganana ny Village artisanal lehibe eny Ivato amin’ny velaran-tany mirefy roa faingo dimy hekitara.
Hatomboka amin’ity taona 2020 ity ihany koa ny fanatanterahana ny tetik’asa “One District, One Factory”. Izany hoe hatsangana eny anivon’ny Distrika tsirairay ny orin’asa mpanodina vokatra mifanaraka amin’ny vokatra eny an-toerana.
Nampandraisana anjara mavitrika amin’ny fanampiana tosika ny sehatra ara toe-karena ny diplaomasia malagasy. Koa dia napetraka ny “fitaratra ara toe-karenan’i Madagasikara” teo anivon’ny Masoivohon’i Madagasikara ao amin’ny Nosy Maorisy. Ary hampitomboina dimy indray ireo “Fitaratr’i Madagasikara” ireo any amin’ny Masoivoho Malagasy any Paris, New York, Beijing, Bruxelles ary Genève mba hampahalalàna bebe kokoa ireo harenan’i Madagasikara, sy ireo vokatra vita Malagasy. Ho famerenana amin’ny laoniny ny hasin’ny diplaomasia Malagasy dia tontosa ihany koa ny asa fanamboarana ireo Masoivohon’i Madagasikara ao Port Louis, Paris, ary Roma. Mbola hitohy ny fanamboarana any amin’ny Masoivoho hafa.
Izany no hatao dia mba hampitomboana hatrany ny fampiasam-bola vahiny eto Madagasikara, hampisongadinana ny « Vita Malagasy », ary hanatevenana ny isan’ny mpizaha-tany mitsidika an’i Madagasikara.
Hatomboka amin’ny faran’ity taona 2020 ity ihany koa ny tetik’asa “Andro natokana ho an’ny Firenena” na “Journées Pays” izay hetsika hampifandraisana ny sehatra tsy miankina amin’ny Masoivoho vahiny miasa eto Madagasikara sy ireo orinasa vahiny. Etsy ankilan’izany ny Tetik’asa mitondra ny anarana hoe “Andron’ny Faritra” iarahan’ny Ministeran’ny raharaham-bahiny sy ireo Ministera tompon’andraikitra, izay fomba iray hampihaonana ny tompon’andraikitra sy ny orinasa avy amin’ny Faritra amin’ireo Mpiara-miombon’antoka sy ireo Masoivohon’ny firenena vahiny eto Madagasikara. Ny tanjona amin’izany dia ny fanitarana ny fandrosoana ara toe-karena any amin’ireo faritra rehetra eto Madagasikara.
Mahakasika ny sehatrin’ny tontolo Ambanivohitra, ny Fambolena, ny Fiompiana sy ny Jono dia betsaka ny ezaka natao nanditra ny taona 2019 ka toy izao ny santionan’ny asa vita:
Raha ny fambolena manokana dia velaran-tany voatondraka enina arivo sy telo alina hektara mahery (36.507 Ha) no narenina ary niampy velaran-tany iray alina hektara mahery (10.480 Ha) vaovao izany. Ireto avy ny distrika nanaovana izany isam-paritra: Faritra Alaotra Mangoro dia Ambatondrazaka – PC15, Amparafaravola – Sahamaloto sy PC23, Moramanga – Ampasimpotsy sy Mandialaza. Faritra Amoron’i Mania dia Ambatofinandrahana Amborompotsy ao Saharovola, Lambamena, Ankosy sy Ambalamontana ary ao Manandriana Ambovombe Centre Lemak’i Agnara. Faritra Analamanga dia Andramasina Tankafatra. Faritra Analanjirofo dia Fenoarivo Atsinanana, Manakambahiny Ambodimanga II sy Maroaomby Vohilengo. Faritra Androy dia ao Bekily Beraketa, tohadrano faha-2 ao Menakompy sy ao Ambovombe Imanombo Finday. Faritra Anosy dia Amboasary Atsimo, Tsivory Tsimanangy sy Maniry, Betroka Ianambinda Sakoa ary ao Amboasary. Faritra Atsimo Andrefana dia asa fikarakarana ny fotodrafitr’asa ao Tanandava Station sy Ankatsakantsa Atsimo, Morombe. Faritra Atsinanana dia Toamasina II Antetezambaro Antohidrano. Faritra Boeny dia fanarenana ny tunnel fampitana ao Antanananivony Marovoay sy ny tohadrano ao Bealoy Belobaka Mahajanga II. Faritra Bongolava dia ny faritra fambolena ao Bezahatra sy Andoharano ao Fenoarivobe. Faritra Diana dia tao amin’ny lemak’i Mahavavy Ambilobe, Fampidiran-drano ao Anketrakabe sy Anivorano-Avaratra, Antsiranana II. Faritra Ihorombe dia natomboka ny asa ao Iakora eo amin’ny Faritra Anarabe sy Begogo. Faritra Itasy dia fanarenana ny faritra voatondraka ao Avarabary Imerintsiatosika Arivonimamo. Faritra Mahatsiatra Ambony dia lemak’i Ampahidranolava Vohibato, sy Fitampito ary Mangidy ao Ikalamavony. Faritra Menabe dia mitohy ny asa ao Dabara. Faritra Vakinankaratra : Fanarenana ny lemak’i Andriampatsy Alakamisy Antsirabe II, fanarenana ny faritry Ambodiriana Soavina Betafo. Faritra Melaky dia mitohy ny asa ao Beboka, Bejangoa sy Soatana Trangahy, Ankazomena Bekopaka Distrika Antsahalova, Fanatsarana ny lemak’i Marofilaly Marohazo, fanarenana ny Demoka Betanatana, Veromanga samy Distrika Maintirano. Faritra Sofia : Fanarenana ny faritry Angoaka Ambatofalio Analalava, fanarenana ny fanondrahan-drano ao Antanimbaribe Tsiningia Port Berge, fanajariana tany ao Tsimalao sy Morafeno ao Befandriana Avaratra, fanajariana tany ao Kalandy Mandritsara. Faritra Vatovavy Fitovinany : Fanarenana ny lemak’i Nofia Bekatra Manakara sy fanajariana ny lemak’i Marofototra Andranomavo Mananjary.
Lakan-drano fanondrahana mirefy arivo kilometra (1.014 km) no vita ny fanarenana, ny fanamboarana na ny fikojakojana azy tao amin’ny Faritra Itasy, Bongolava, Anosy, Melaky, Sofia, Boeny, Androy, Betsiboka, Alaotra Mangoro, Analamanga, Matsiatra Ambony, Atsinanana, Atsimo Atsinanana, Vakinankaratra, Amoron’i Mania ary Vatovavy Fitovinany.
Raha ny fiompiana indray dia samy nanaovana ezaka ny fiompiana omby, akoho, kisoa, ondry, osy, tantely amin’ny Distrika maro manerana ny Nosy.
Toerana famonoana omby telo no naorina tao Toamasina, Vangaindrano ary Taolagnaro.
Abattoir manara-penitra iray tao Bongolava Tsiroanomandidy koa no natsangana.
Fiompiana omby fakana hena fitaratra telo no naorina tao Toamasina, Tsiroanomandidy sy Taolagnaro.
Omby mihoatra ny efajato sy roa arivo no nametrahana Marika Voaaradia (puces géolocalisables) mba hiarovana andian’omby miisa eo amin’ny dimy alina sy roa hetsy ao Bongolava sy Menabe.
Nametrahana fanotrehana akoho mandeha amin’ny herin’aratra ary mahazaka atody valopolo sy efajato avy ireto Distrika ireto: Ambohidratrimo, Antsiranana, Tsiroanomandidy, Mahajanga, Toamasina I sy Toamasina II.
Zana-kisoa faka taranaka mihoatra ny roa arivo no nomanina ary ireto no Distrika nisitraka izany : Andramasina, Antananarivo Avaradrano, Antananarivo Atsimondrano, Ambohidratrimo, Manjakandriana, Ankazobe, Anjozorobe, Antsirabe I, Antsirabe II, Betafo, Faratsiho, Morondava, Miarinarivo, Tsiroanomandidy. Narenina ihany koa ny foibe fanotrehana atody ao Ivato Ambohidratrimo.
Ondry aman’osy mihoatra ny fito arivo no nozaraina.
Teo amin’ny Jono dia amboarina ankehitriny ny sambo Telonify sy Antsantsa izay an’ny Foibe fanarahamaso ny jono.
Foibe fikarakarana ny vokatra avy anaty rano miisa sivy no naorina ka roa tao Antsiranana II (Ankoranga sy Ambavarano), iray tao Morondava Bemanonga, iray tao Vohémar Ampisikinana ary dimy tao Ambovombe, Beloha, Tsihombe, Tranovaho ary Marolinta.
Vondrona Fototra Mpitarika ny famokarana “algues marines” valo no nampiana tosika ara-bola tao Sainte Marie.
Zana-trondro dimy hetsy sy iray tapitrisa no notsinjaraina tamin’ny mpiompy.
Ireto kosa ny asa atomboka sy mitohy amin’ity taona 2020 ity: Faritra Alaotra Mangoro : Fanarenana hatao ao Imamba Ivakaka, PC23 Amparafaravola ary ny ao Vodivato Antanimenabaka Andilamena. Faritra Amoron’i Mania : Fanarenana ny faritry Anampina Ambatofinandrahana, Antsontsa Soavina Ambatofinandrahana ary Analalehibe Ilaka Centre Ambositra. Faritra Analamanga : Fanarenana faritra voatondraka ao Manandona Ambohimiadana Andramasina. Faritra Atsimo Atsinanana : Fanarenana faritra voatondraka maromaro ao Farafangana toy ny Sahanalaotra, Sahavano, Andrafia, Pimarohaka Andramena, Mahavelo ary Bekaraoka. Faritra Betsiboka : Fanarenana ny fitarihan-drano ao Mahatsinjo, Maevatanana. Faritra Bongolava : Fanamboarana ny faritra tondrahana ao Andohafarihy Miandrarivo sy idin-drano ao Ambalanirana Tsiroanomandidy, fanarenana làlana (piste rurale) mampitohy an’i Ankadibevava sy Ambohitromby distrika Fenoarivobe mba hanamoràna ny famoaham-bokatra. Faritra Diana : Fanarenana faritra voatondraka ao Antsiranana II sy Ambanja. Faritra Itasy :Fanamboarana trano fisivanana sy fanadiovana kafe miisa 2 ao Soavinandriana sy Miarinarivo. Faritra Matsiatra Ambony : Fanajariana ny faritra ho tondrahana vaovao ao Sahambavy sy Alakamisy Ambohimaha distrika Lalangina, ary ao Ankaraoka Fianarantsoa. Faritra Melaky : Fanarenana lemaka ao Berevo Ranobe sy Bemokotra Atsimo ao Maintirano. Faritra Menabe : Fanajariana ny faritra ho tondrahana vaovao maro ao Belo sur Tsiribihina, Manja ary Morondava. Faritra Sofia : Fanarenana ny lemaka ao Anahidrano. Faritra Vatovavy Fitovinany : Fanarenana ny lemaka ao Bekatra, Ampasimanjeva, Ambila Amboanjo ao Manakara, Vohitrindry, Vatomasina samy ao Vohipeno, Tsiatosika ao Mananjary ary Avanja, Ambodivandrika ao Ifanadiana
Eo amin’ny sehatry ny tontolo iainana, natao laharam-pahamehana ny fiarovana ny ala sy ny tontolo iainana ary ny fitantanana maharitra sy ara-drariny ireo harena voajanahary toy ny biby sy zava-maniry miavaka izay tsy misy afa tsy eto amintsika.
Nanomboka tamin’iny taona 2019 iny ny fametrahana ny foto-drafitrasa maitso ka ny tanjona dia ny fambolen-kazo ho an’ny velaran-tany efatra alina hekitara isan-taona eran’i Madagasikara. Velaran-tany arivo sy efatr’alina hektara (41.065 Ha) no voavoly ny taona 2019 ka valo arivo sy telo alina hektara (38.609 Ha) no ala tsotra ary efajato sy roa arivo hektara (2.457 Ha) ny ala honko.
Ho fiarovana ny ala dia natao laharam-pahamehana ny fanomezan-danja ny toekarena maitso sy ny toekarena mifampitsinjo. Noho izany, dia natomboka tamin’iny taona 2019 iny ny tetikasa miisa telo fanodinana ny fako hasolo arina ao Toamasina, Antsiranana ary Antananarivo Avaradrano. Mbola mitohy amin’ity taona 2020 ity ny famitana ireo fanorenana ireo sy ny fampitaovana azy ireo.
Mametraka tanjona ny hamokarana zanakazo enim-polo tapitrisa isan-taona mba ahafahana manatratra ny tanjona fandrakafona ala efatr’alina hektara isan-taona an’i Madagasikara.
Hatao tanamaro miaraka amin’ny mponina any amin’ny distrika sy ny kaominina ny fambolenkazo, ary hatao ezaka manokana ny fanarahamaso azy ireny. Ny tanjona dia ny hisian’ny fandraisana andraikitra sy ny fiarahamientan’ny fanjakana sy ny mponina.
Homen-danja manokana ny hazo fandrehitra, ny ala honko, ny bambou, ny hazo fampiasan’ireo mpanao asa tanana ary ny hazo fihinamboa. Hisy fambolena raketa amin’ny Faritra Androy izay miaina haintany sy misedra ny fahapotehan’ny tany azo ambolena (ensablement). Hatao vaindohan-draharaha ihany koa ny fambolena ireo hazo sarobidy lany tamingana (bois de rose, palissandre, ébène).
Amin’ity taona 2020 ity koa no hividianana ireo “drones” folo hampiasaina hamafazana ireo voa hanatrarana ireo toerana saro-dalana ka hahazahoantsika vokatra tsara kokoa.
Handrakotra ala roapolo hektara amin’ny paulownia, bambou, acacia, sy ny hazo mitombo malaky ny Ministera misahana ny Tontolo iainana amin’ity taona ity mba hatao fitaratra (vitrine), noho ireo hazo ireo azo ahodina haingana hamahana ny filàna isankarazan’ny mponina.
Eo amin’ny sehatry ny Paositra, ny Fifandraisan-davitra ary ny Fampiroboroboana ny kajy mirindra dia betsaka ny ezaka efa vita toy ny :
Ny fiaraha-miasa amin’ny sampandraharaham-panjakana, orinasa ary tranom-barotra lehibe maro eto amintsika amin’ny alalan’ny “e-Paiement”. Efa natomboka izany tamin’ny taona 2019 ka roa arivo sy iray hetsy ny mpanjifa ny Paositra Money amin’izao fotoana izao. Ny tanjona dia ny hahatratrarana mpanjifa miisa telohetsy amin’ny taona ho avy.
Ny fanatsarana ny fotodrafitr’asa ka iarahantsika mahita ny fanavaozana ny Foiben’ny Paositra Malagasy eo Antaninarenina izay efa eo an-dàlam-pahavitana.
Amin’ity taona 2020 ity dia maro ireo asa hotanterahina, ka ao anatin’izany:
Ny asa fanavaozana ny biraon’ny paositra maro eto amintsika toy ny any Mananjary, Ambohimandroso, Sambava, Morondava, Maintirano, Ampefy, Ihosy, Nosy Be, Andranofasika, Ambato-Boeny, Mahatsinjo, Maevatanana, Anivorano Atsinanana, Manakara, Sakaraha, Taolagnaro, Ambovombe, Fenoarivo-Atsinanana, Ambatofinandrahana, Ambositra, Moramanga, Ambatondrazaka, Fianarantsoa, Antsiranana, Mahajanga, Toamasina, Toliara, Tsaralalàna, Talatamaty, Antaninarenina, Antanimena, Andravoahangy, Ambohimanarina ary Ambanidia.
Ny fananganana Smart Villages dimampolo amin’ny distrika efapolo manerana ny Nosy ka isan’izany ny Distrikan’i : Bekily, Mahanoro, Mananjary, Amparafaravola, Miarinarivo, Ampanihy Andrefana, Taolagnaro, Ambovombe Androy, Tsiroanomandidy, Soavinandriana, Ambalavao, Port-Bergé, Fenoarivo Atsinanana, Ambatondrazaka, Betioky Atsimo, Amboasary Atsimo , Beloha, Tsihombe, Antanifotsy, Iakora, Mampikony, Maroantsetra, Andilamena, Beroroha, Manja, Fenoarivobe, Sambava, Ambatofinandrahana, Fandriana, Vangaindrano, Nosy Varika, Antsalova, Ankazoabo Atsimo, Sakaraha, Betroka, Anjozorobe, Ambilobe, Ivohibe, Midongy Atsimo, Marovoay.
Fanokafana Hotspots tsy andoavam-bola na Wifi gratuit amin’ireto tanàna ireto : Ambohidratrimo, Ambohijanaka, Ambohimanga-Rova, Sabotsy Namehana, Tsiroanomandidy, Arivonimamo, Miarinarivo, Ampefy, Antsirabe, Ambanja, Ambilobe, Antsiranana, Sambava, Ambalavao, Fianarantsoa, Ambositra, Ihosy, Farafangana, Vangaindrano, Manakara, Mananjary, Ambondromamy, Mahajanga, Maevatanana, Maintirano, Antsohihy, Port-Bergé, Mahanoro, Toamasina, Foulpointe, Fenoarivo-Atsinanana, Sainte-Marie, Ambatondrazaka, Moramanga, Ampanihy, Sakaraha, Toliara, Taolagnaro, Ambovombe, Belo sur Tsiribihina, Morondava, Antananarivo I, Antananarivo II, Antananarivo IV, Antananarivo V. Fanombohana ihany ny amin’ity taona ity amin’ireo distrika dimy amby ny efapolo ireo fa hahenika ny distrika rehetra maneran’ny Nosy ny ezaka ataontsika.
Fampandehanana ny tetik’asa fanatsarana ny tambazotram-pifandraisan-davitra eo amin’ny sampan-draharaham-panjakana : Ho hita amin’izany ny fametrahana ny teknolojia vaovao amin’ny fandriampahalemana na « caméras de surveillance » amin’ireo toerana maro manerana ny nosy, ny fametrahana ny « fibre optique » amin’ireo tanàna vaovao, fanatsarana ny tambazotran-tserasera manerana ireo sampan-draharaham-panjakana amin’ny alalan’ny teknolojia vaovao sy fitaovana maro isan-karazany.
Eo amin’ny lafin’ny Asa vaventy sy ny Fanajariana ny tany dia maro ny ezaka natao ka nahitana vokany toy izao :
Làlana manodidina ny valon-jato kilometatra no narenina mba ho azo ampiasana tany amin’ny Distrikan’Antananarivo Renivohitra, Antananarivo Atsimondrano, Antananarivo Avaradrano, Ambohidratrimo, Toamasina II, Fenoarivo Atsinanana, Soanierana Ivongo, Ambilobe, Ambatolampy, Antsirabe I, Antsirabe II, Ambositra, Ambohimahasoa, Fianarantsoa I, Fianarantsoa II, Ambalavao, Ihosy, Sakaraha, Toliara I, Toliara II, Manjakandriana, Moramanga, Brickaville, Taolagnaro, Amboasary, Ambovombe, Farafangana, Vangaindrano, Manakara, Ambatondrazaka, Amparafaravola.
Natomboka ny fanamboarana ny RN44 mampitohy an’i Marovoay sy Vohidiala.
Natomboka ihany koa ny fanamboarana ny RN5A mampitohy an’i Ambilobe sy Vohémar.
Miroso ihany koa ny fanamboarana ny RN9 mampitohy an’Analamisampy sy Manja ao amin’ny Distrikan’i Morombe sy Manja, ary ny fanorenana ny tetezan’i Bevoay amin’ny reniranon’i Mangoky.
Efa miroso ihany koa ny fanomanana sy fandinihina ny fanarenana ny RN12A sy ny fanorenana ireo tetezana valo mampitohy an’iny làlana iny izay mahasehika Distrika telo dia Farafangana, Vangaindrano ary Taolagnaro.
Efa miroso ihany koa ny fanomanana sy fandinihina ny fanamboarana ny RN13 Taolagnaro – Ambovombe.
Nanomboka ny fanamboran-dàlana ao antampon-tànan’ny Sambava fantatra amin’ny hoe Maman’i Dolores.
Vita tanteraka ny tetezana ao Andranonakova, Manandriana.
Natsaraina ny làlana tao amin’ny Distrika Avaradrano manodidina an’Ankadinandriana, Ambatomilona ary Ambohijato.
Mahakasika ny RN7 manokana dia efa misy ny vita ao amin’ny tanànan’Antsirabe I ary ny tetezan’i Vohiposa dia an-dalam-pahavitana amin’ity taona ity.
Ny famerenana amin’ny laoniny ny làlana RN5 Toamasina-Fenoarivo Atsinanana dia eo amperin’asa tanteraka ary vinavinaina ho vita tsy ho ela intsony.
Ny Kaominina ambanivohitra Mananasy sy Mahavelona ao amin’ny Distrikan’i Soavinandriana dia efa misitraka ihany koa ny fanatsarana ny làlana.
Namboarina tanteraka ny tetezana eo Mananjemba RN6.
Vita ny bac tao Brickaville rehefa simba nandritra ny fotoana maro.
Vita ihany koa ny fanarenana ny seranam-piaramanidin’Ambatondrazaka. Toy izany koa ny ao Antsohihy.
Amin’ity taona 2020 ity dia toy izao ny laharampahamehana napetraka:
Ho fanatsarana ny endriky ny Renivohitr’i Madagasikara sy hampihenana ny fitohanana lavareny dia atomboka ilay tetik’asa fananganana fly-over eo Anosizato sy eo Andohatapenaka.
Ho vitaina ihany koa ireto lalam-pirenena ireto: RN14 Ifanadiana – Ikongo – Vohipeno, ampahan’ny RN12 miditra ny tanànan’i Farafangana, RN11 Mahanoro-Marolambo.
Ny RN23A Anosibe An’Ala dia ezahintsika ny hanatsarana azy mba ho azo aleha tsara. Toy izany koa ny RNT15 Ankazoabo – Sakaraha – Beroroha, RNT18 Ihosy – Ivohibe – Vondrozo – Midongy – Befotaka ary RNT19 Katsepy – Mitsinjo – Soalala – Besalampy.
Atomboka tsy ho ela intsony ny fanamboarana ny làlana RN6 Ambanja – Antsiranana.
Atomboka ihany koa ny fanamboarana ny làlana RN1 Bis Maintirano – Tsiroanomandidy.
Amboarina ny làlana ao antampon-tànanan’i Soalala sy ny rindrim-bato miaro ny tànana.
Harenina ny làlana RN6 Ambondromamy – Ambanja, RN34 Miandrivazo – Antsirabe, RN35 Malaimbandy – Morondava, RN12, RN7, RN43 Analavory – Sambaina, RN5 Fenoarivo Atsinanana – Soanierana Ivongo ary làlana maro amin’ny renivohitry ny Faritany sy làlana ao antampon-tànan’Antsirabe.
Tohizana ny asa fandinihana sy ny fifanarahana amin’ireo mpiara-miombon’antoka mikasika ny làlana RN13.
Amboarina ny tetezana Antanamarina RNT19 sy ny tetezana Antaralava RNT15.
Eo amin’ny sehatry ny Angovo, ity farany ity dia anisan’ny sehatra iray fanoitra hanarenana ny toe-karena ary ahafahana indrindra ihany koa mitondra fampandrosoana ho an’ny Firenena. Anisan’ny lalan-kevitra noraisin’izao Governemanta izao dia ny fidirana amin’ny fampiasana ny angovo azo havaozina ka ialàna tsikelikely amin’ny fampiasana angovo mampiasa solika.
Foibe mamokatra herinaratra mandeha amin’ny angovo azo avy amin’ny masoandro tao amin’ny Distrika Ihosy sy Antsirabe no naorina ny taona 2019.
Nisy koa ireo Foibe mamokatra angovo azo avy amin’ny rano (centrale hydroélectrique) no natsangana tao Sarobaratra (Miarinarivo), Ambatomanoina (Anjozorobe) ary ny tao Androka (Ambatondrazaka).
Tontosa ihany koa ny fanamboarana ireo tambazotra herinaratra avy amin’ny masoandro (Mini-Grid solaire) ao amin’ny tànana folo dia ny ao Manombo sy Antanimeva (Toliara II sy Morombe), Ampasina Maningory sy Ampasibe Manantsatrana ary Vohilengo (Fenoarivo Atsinanana), Anjahambe (Vavatenina), Marovato Ouest (Andapa), Bemanevika (Sambava), Ambatonikolahy (Betafo) ary tao Antsampandrano (Ambatolampy).
Distrika enina no voakasiky ny fanarenana ny tambazotra fitsinjarana angovo azo avy amin’ny rano dia ao Ambohidratrimo, Amparafaravola, Behenjy, Bealanana, Ambohimahasoa ary Brickaville.
Eo amperin’asa koa ny tompon’andraikitry ny fananganana ireo foibe mamokatra angovo avy amin’ny masoandro any Mangily sy Anakao (Toliara II) ary ny ao Antsirabe.
Efa miroso amin’ny fampidirana amin’ny tambazotra fanapariahana angovo sy fampiasana angovo fanampiny avy amin’ny masoandro isika ao amin’ny Distrika Antsohihy, Toamasina, Toliara, Morondava, Sambava, Nosy Be, Andapa, Antalaha, Vohémar ary Port-Bergé.
Efa tanàna maromaro ihany koa no hitantsika fa nanatanterahana na eo andalam-panatanterahana ny fametahana ireo andrin-jiro manazava ny làlana toy ny ao Ambatofinandrahana, Ambohimahasoa, Fianarantsoa, Ihosy, Ambalavao, Mananjary, Manakara, Nosy Varika, Vohipeno, Farafangana, Vangaindrano ary Mahajanga.
Raha ny asa ho tanterahana amin’ny sehatry ny angovo koa amin’ity taona 2020 ity, dia anisany ny fanohizana ny fametahana andrin-jiro mba hanazava ny làlana any amin’ny Distrika maro.
Ho vatsiana « générateurs hybrides » ny hopitaly sivy amby folo ka ny renivohitry ny Faritany (Antananarivo, Toamasina, Mahajanga, Fianarantsoa, Toliara ary Antsiranana) no apetraka ho laharampahamehana.
Ny fanambàrana ny asa-pametrahana ny fifanarahana eo amin’ny fanjakana Malagasy sy ireo orin’asa miaraka amin’ny mpiara-miombon’antoka vahiny mahakasika ny tetikasa Sahofika sy Volobe dia tanterahana amin’ity taona ity ihany koa.
Hatomboka amin’ity taona ity ihany koa ny fampiasana ireo « bornes de paiement » amin’ny fandoavana ny faktioran’ny Jirama. Ireo Distrika lehibe sady renivohitry ny Faritany no hanombohana izany.
4. Ny lafiny Sosialy
Eo amin’ny sehatry ny Fanabeazana sy Fiofanana ho an’ny rehetra dia miova tanteraka ny fijerin’ny Governemanta raha ny fampianarana no jerena noho izy mametraka lalantsaina miainga amin’ny fanorenana sekoly fa tsy lakilasy fotsiny. Ezahina ny hahatonga ny zaza malagasy farany izay betsaka hiditra an-tsekoly amin’ny alalan’ny fampihenana ny elanelan’ny toeram-pianarana sy ny toeram-ponenana.
Ho an’ny taona 2019, nikasa hanangana sekoly manara-penitra isika: EPP miisa telopolo, CEG miisa valo ary Lycée miisa enina. Misy ireo efa vita tanteraka toy ny EPP ao Ambatondrazaka, EPP ao Ifanadiana ary EPP ao Ambositra, ka afaka handraisana mpianatra amin’ny taom-pianarana ho avy. Ny ambiny kosa dia eo andalam-pamitana.
Ny tanjona ho amin’ny taona 2020 dia ny fananganana :
EPP manarapenitra telopolo (30) no hatsangana ao Nosy Be, Ambanja, Antalaha, Andapa, Marovoay, Maroantsetra, Soanerana Ivongo, Sainte-Marie, Maevatanana, Ambohidratrimo, Anjozorobe, Ankazobe, Manjakandriana, Soavinandriana, Ankadinondry Sakay, Foulpointe, Mahanoro, Antanifotsy, Ambatolampy, Faratsiho, Fandriana, Nosy varika, Ihosy, Ampanihy, Morombe, Vangaindrano, Betroka, Amboasary Atsimo, Beloha ary Bekily.
Ny Distrika sivy amby folo amby zato (119) manerana ny Nosy ihany koa dia hananganana efitrano fianarana fanampiny (salles de classe) efatra avy. Izany hoe enina amby fitopolo sy efajato efitrano fianarana no hatsangana ihany koa amin’ity taona ity.
CEG valo vaovao ihany koa no hatsangana amin’ity taona ity ao Sambava, Port-Bergé, Ambatondrazaka, Moramanga, Arivonimamo, Antsirabe I, Antananarivo Atsimondrano ary Taolagnaro.
Lycée enina ao Antsohihy, Mahajanga, Toamasina I, Mananjary, Fianarantsoa ary Ambovombe ihany koa no hatsangana.
Hotohizana ny fandraisana ho mpampianatra raikitra ireo mpampianatra FRAM.
Ho fanohizana ny fenitry ny fanabeazana ho an’ny rehetra dia ezahina ny fanitarana ny fampianarana ambaratonga ambony mba hanantona hatrany ny vahoaka eny ifotony.
Arak’izany dia naorina nanomboka ny taona 2019 ny Oniversite tamin’ny Faritra maromaro toa an’i Soavinandriana, Morondava, Fenoarivo-Atsinanana, ary Antsirabe.
Amin’ity taona 2020 ity dia hotohizana ny asa fanapariahana ny fianarana ambaratonga ambony ka ny tanjona apetraka dia :
Ny fananganana Oniversite efatra vaovao any Taolagnaro, Antsohihy, Maintirano ary ao SAVA.
Ny fananganana ny trano fonenana sivy vaovao ho an’ny mpianatra izay haorina eto Antananarivo, Toliara, Antsiranana, Mahajanga, Morondava, Soavinandriana, Fenoarivo Atsinanana ary Antsirabe.
Ny fanarenana ny Campus eny Vontovorona.
Ny fampitaovana ireo fanorenana rehetra ireo sy ny sampandraharaha tena mila izany ihany koa.
Eo amin’ny sehatry ny fahasalamana izay zo fototra ho an’ny olombelona, natao vaindohan-draharaha hatrany ny fahasalamam-bahoaka.
Hopitaly manarapenitra CHRD miisa telo amby ny folo no natomboka tamin’ny taona 2019 any Ambohimahasoa, Analalava, Antsalova, Beloha, Iakora, Ivohibe, Mahabo, Mampikony, Manandriana, Mandritsara, Tanambao Manampotsy, Vohibato ary Vondrozo. Ny CHRR Maintirano dia marihina fa anisan’ny hopitaly lehibe izay natomboka tamin’ny taon-dasa ihany koa.
Ny fanombohan’ny asa fananganana “Unité de transplantation rénale” eny amin’ny CHU Andohatapenaka dia natao tamin’ny taona 2019.
Ankoatry ny Hopitaly Manarapenitra dia nanangana CSB II telo ambin’ny folo ihany koa isika ny taona 2019. Folo ny CSB efa vita tamin’ny taona 2019 dia ny tao Ambatomitsangana (Soavinandriana), Sendrisoa (Ambalavao), Ranohira (Ihosy), Mahatsara (Ambatondrazaka), Ambonivohitra (Ambatondrazaka), Talatanangavo (Ankazobe), Manjarivo (Manakara), Motombositra (Beloha), Antetezamintsina (Andapa), Ankaratra (Ambilobe). Ny mbola tsy vita dia ny any Ambodirano (Vondrozo), Bekodoka (Besalampy) ary Manja.
Amin’ity taona 2020 ity dia ezaka maro no hatao :
Ny fametrahana ny mpiasa sy ny fitaovana amin’ireo fotodrafitrasa vaovao.
Ny fanorenana CSB ao anatin’ny Distrika dimy indray dia ny ao Sampoina (Ambovombe), Antselibe (Beloha), Marovato (Tsihombe), Beahitsy (Ampanihy) ary Maroalipoty (Ambovombe).
Ny fananganana toeram-ponenana ho an’ireo mpitsabo sy tompon’andraikitra any amin’ireo toerana lavitra mba hamporisihina azy ireo amin’ny asany. Noho izany dia trano fonenana any amin’ireo Distrika miisa sivy ambin’ny telopolo ireo no hatsangana ao Maintirano, Ambatomitsangana (Soavinandriana), Sendrisoa (Ambalavao), Ranohira (Ihosy), Mahatsara (Ambatondrazaka) Ambonivohitra (Ambatondrazaka), Talatanangavo (Ankazobe), Manjarivo (Manakara), Motombositra (Beloha), Antetezamintsina (Andapa), Ankaratra (Ambilobe), Ambodirano (Vondrozo), Bekodoka (Besalampy), Manja (Manja), Sampoina (Ambovombe), Maroalipoty (Ambovombe), Antselibe (Beloha), Marovato (Tsihombe) ary ny ao Beahitsy (Ampanihy).
Ny fanamboarana “logements administratifs” ho an’ireo mpitsabo sy tompon’andraikitra amin’ireo hopitaly manarapenitra vao hajoro izay miisa telo ambin’ny folo ka hisitraka an’izany ireto Distrika ireto : Antsalova, Beloha, Mampikony, Manandriana, Iakora, Alakamisy Itenina, Vondrozo, Ambohimahasoa, Analalava, Mandritsara, Ankilizato, Ivohibe ary Antanambao Manampotsy.
Ny fampitaovana ny bloc opératoire ao Mahavoky Atsimo, Mahajanga.
Ny asa fanarenana ny ao amin’ny « Centre de rééducation motrice » ao Antsirabe, ny « Service Pédiatrie » ao amin’ny CHU Place Kabaro Antsiranana, ny « Salle de rééduction » ao amin’ny CHUAM.
Ny fandraisan’ny Fanjakana an-tànana manontolo ireo soins d’urgence an’ireo marary tonga tampoka eny amin’ny service d’urgence amin’ireo hopitaly CHU amin’ny renivohim-paritany enina eto amintsika.
Ny fampitaovana maro ho an’ny CHU vitsivitsy dia ny ao Ambohimiandra (Antananarivo), Fenoarivo (Antananarivo) ary ny « bloc maternité » ao Tambohobe (Fianarantsoa).
Ny asa fanarenana ny hopitaly manarampenitra miisa enina izay efa ampiasaintsika ankehitriny.
Ao anatin’izao fotoam-pahamehana ara-pahasalamana izao dia betsaka ny ezaka sy fepetra noraisina mba hiadiana amin’ity COVID-19 ity. Ambava ady tamin’izany ny mpiasan’ny fahasalamana sy ny mpitandro filaminana isan-tsokajiny. Ny fanafody CVO fanefitra sy entina mitsabo ny COVID-19 dia tombondahiny lehibe ho antsika Malagasy. Paikady efa mari-pototra eto amin’ny firenentsika ny fampiasana ireo antsoina hoe raokandro nohatsaraina (remèdes traditionnels améliorés na RTA) ka nahafahana avy hatrany namokatra fanefitra niainga avy amin’ny artémesia.
Nahafahana nisitraka fanampiana maro avy amin’ireo firenena namana sy ny orinasa vahiny ny diplaomasia malagasy ary nentina nanatsarana ny fifandraisan’i Madagasikara amin’ireo firenena maro ny fanolorana CVO ho an’ireo izay liana amin’izany. Nihatsara ny lazan’i Madagasikara manerana izao tontolo izao ary nihamaro ny firenena vonona ny hifanome tanana amintsika eo amin’ny lafiny maro amin’ny Fampandrosoana.
Eo amin’ny sehatry ny rano fisotro madio dia Distrika maro manerana ny Nosy no mijaly rano nandritry ny fotoana maharitra satria tsy ampy ny fampitaovana maharitra ho amin’izany kanefa ny isan’ny mponina sy ny tanan-dehibe dia tsy mitsahatra mitombo hatrany.
Amin’ity taona 2020 ity dia nanapa-kevitra ny fitondram-panjakana fa hanao fampitaovana amin’ny Distrika mihoatra ny telopolo amin’ny alalan’ny asafanorenana na fanitarana foto-drafitr’asa na fampitaovana ireo “forages” efa vita na fanatsarana ny fitsinjarana ny rano fisotro madio any amin’ny mponina any ka voakasika amin’izany ireto Distrika ireto : Soalala, Kandreho, Ampanihy, Manja, Fenoarivo Atsinanana, Taolagnaro, Manakara, Betroka, Betioky, Soavinandriana, Mahajanga I, Mahabo, Nosy Be, Belo sur Tsiribihina, Bekily, Ambovombe, Beloha, Ankazoabo, Antanifotsy, Farafangana, Tsihombe, Antsalova, Ambalavao, Mandritsara, Fenoarivobe, Miandrivazo, Mananara Avaratra, Mampikony, Sakaraha, Besalampy, Ivohibe, Ifanadiana, Morafenobe, Vatomandry ary Miarinarivo.
Ny eo amin’ny trano fonenana sy ny famoronana tanàna vaovao dia hatomboka amin’ity taona ity ireo fanorenana trano fonenana ho an’ny daholobe (logements sociaux) ka toeram-panorenana folo no hisitraka izany ao anatin’ireto Distrika ireto : Toliara I, Fianarantsoa I, Antananarivo, Toamasina I, Antsiranana I, Mahajanga I ary Antsirabe I.
Efa miatomboka sy mitohy amin’ity taona ity ihany koa ny fanadihadiana amin’ireo toerana hananganana tanàna vaovao ankoatran’Antananarivo.
Eo amin’ny lafin’ny fiahiana ny mponina, ny fiahiana ara-tsosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy dia toy izao ny ezaka efa natao tamin’ny taona 2019:
Fananganana trano efatra amby ny fitopolo ho an’ny fametrahana vondrom-piaraha-monina ho an’ny fianakaviana marefo any Antsapanimahazo, Antsirabe II.
Fananganana trano ho an’ny olona sahirana any Ambohijafy, Toamasina I.
Fananganana ivotoerana fikarakarana an’ireo niharan’ny herisetra mifototra amin’ny maha-lahy sy ny maha-vavy (Violences Basées sur le Genre -VBG) eto Antananarivo.
Fanatsàrana biraom-panjakana sy ny asan’ny Ministera misahana ny Mponina any Antsiranana I, Antsohihy, Vangaindrano ary Vatomandry.
Fananganana biraom-panjakana hanatsarana ny asan’ny Ministera misahana ny Mponina any Mahanoro, Sonierana Ivongo, Sainte-Marie, Fenoarivo Atsinanana.
Fanohanana an’ireo tetikasa fihariana bitika natolotra ireo fikambanam-behivavy miisa dimampolo sy efa-jato, ka distrika enina amby dimampolo no nisitraka an’izany.
Amin’ity taona 2020 ity dia ezaka maro no hotontosaina toy ny :
Fanokafana ny toeram-pisakafoanana “Kaly Tsinjo” ho an’ny marefo ara-pivelomana amin’ireto Distrika ireto: Antananarivo Renivohitra, Ambovombe Androy, Tsihombe, Beloha, Bekily, Amboasary, Betroka, Ampanihy, Toliara, Toamasina ary Fianarantsoa.
Fanohanana an’ireo tetikasa fihariana bitika atolotr’ireo fikambanana samihafa, indrindra ireo fikambanam-behivavy, ho fanatsarana ny farimpiainan’ireo mpikambana ao aminy, ka distrika valopolo no hisitraka an’izany.
Fananganana biraom-panjakana hanatsarana ny asan’ny Ministera misahana ny Mponina miisa valo ambin’ny roapolo any Antanambao Manampontsy, Andilamena, Vohibato, Isandra, Nosy Varika, Ikongo, Bealanana, Mampikony, Ihosy, Antsiranana II, Mananara Avaratra, Mahajanga II, Soalala, Maevatanana, Besalampy, Morombe, Benenitra, Ankazoabo, Manandriana, Miandrivazo, Morondava, Fenoarivobe, Mandoto, Andapa, Soavinandriana, Midongy Atsimo, Befotaka Atsimo ary Vondrozo.
Fananganana ivotoerana miisa efatra fandraisana an-tànana sy fanofanana ireo olona manana fahasembanana any Toamasina, Manakara, Morondava, Moramanga.
Fananganana ivotoerana miisa enina fikarakarana ireo zokiolona any Antsiranana, Mahajanga, Antsirabe, Antananarivo, Fianarantsoa aryToliara.
Fananganana ivotoerana fandraisana vonjimaika ny ankizy tsy misy mpiahy any Nosy Be sy Antalaha.
Fananganana ivotoerana miisa dimy fikarakarana an’ireo niharan’ny herisetra mifototra amin’ny maha-lahy sy ny maha-vavy (VBG) any Ambovombe, Ihosy, Farafangana, Mahajanga II ary Antananarivo.
Fananganana ivotoerana miisa telo fihainoana sy fanoloran-kevitra araky ny lalàna any Beloha, Amboasary Atsimo ary Miarinarivo.
Eo amin’ny fampivoarana ny Tanora dia efa natao ho fenitra ny fametrahana ny tanora Malagasy amin’ny toerana mendrika. Ny fanatanjahantena dia fitaovana iray lehibe entina mampiseho ny firaisam-pirenena sy ny hambompom-pirenena Malagasy.
Natao teto Antananarivo ny fivoriana voalohany taty afrika mahakasika ny “Education physique de qualité” ka nofidian’ireo Ministra afrikanin’ny Fanatanjahan-tena sy Fanabeazana ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina ho lasa « Champion de l’Education Physique de Qualité et du Sport » aty Afrika.
Tsara ny vokatra ara-panatanjahan-tena azon’i Madagasikara tamin’ny taona 2019 raha tarafina tamin’ny vokatra ireto :
Laharana faharoa isika nandritra ny Lalaon’ny Nosy natao tatsy amin’ny Nosy Maorisy.
Tafakatra tamin’ny ampahefadalan’ny CAN natao tany Egypte ny Barea ny taona 2019.
Ny eo amin’ny fotodrafitrasa hafa ho an’ny tanora dia fanorenana kianja manarampenitra no nanaovana ezaka manokana teto amin’ny firenentsika. Distrika telo no nisitraka ny fanorenana kianja manarapenitra lehibe afaka mandray mpijery dimy arivo sy iray alina tamin’ny taona 2019 tao Toamasina, Antsiranana ary Morondava ka eo andalam-pahavitana izy ireo ankehitriny.
Fanorenana kianja manarampenitra sivy amby roapolo mahazaka mpijery arivo hafa ihany koa no natao tamin’ny taona 2019, dia toy izao ireo Distrika nisitraka an’izany : Faritra Bongolava – Tsiroanomandidy, Faritra Anosy – Taolagnaro, Faritra Atsimo Andrefana – Toliara I, Faritra Androy – Ambovombe, Faritra Menabe – Morondava, Faritra Ihorombe – Ihosy, Faritra Vakinankaratra – Betafo, Faritra Matsiatra Ambony – Ambalavao, Faritra Amoron’i Mania – Ambositra, Faritra Vakinankaratra – Ambatolampy sy Antsirabe, Faritra Diana – Antsiranana – Ambilobe – Nosy Be , Faritra SAVA – Sambava, Faritra Sofia – Mandritsara –Befandriana – Antsohihy – Port-Bergé, Faritra Analamanga – Mahitsy – Ambohidratrimo – Ankazobe, Faritra Vatovavy Fitovinany – Vohipeno – Manakara – Mananjary, Faritra Atsinanana – Mahanoro – Brickaville, Faritra Alaotra Mangoro – Moramanga, Faritra Analanjirofo – Fenoarivo Atsinanana.
Marihina fa kianja manarapenitra hafa miisa telopolo indray no atomboka amin’ity taona ity eran’i Madagasikara.
Ankoatra ireo kianja mitafo dia hisy ihany koa ny fanorenana dobo filomanosana olimpika (piscines olympiques) roa any Mahajanga sy Toliara.
Ny kianja mitafo (gymnase) ao Antsirabe dia eo andalam-pahavitana ihany koa. Toeram-pilalaovana tsipy kanetibe roa no naorina tao Toamasina sy Mahajanga tamin’ny taona 2019.
Narenina ihany koa ny tao amin’ny Académie Nationale des Sports (ANS) Ampefiloha. Nisitraka birao vaovao ihany koa ny Fiadidim-paritry ny Tanora sy ny Fanatanjahantena (DRJS) any Morondava. Ary nitarina ny efitrano malalaky ny Tranoben’ny tanora (Maison des jeunes) ao Morondava ihany.
Mbola eo am-panamboarana ny kianjabe Barea etsy Mahamasina isika ankehitriny.
Hatomboka tsy ho ela ny fanorenana kianja mitafo telo afaka mandray mpijery efatra arivo ao Mahajanga, Toliara ary Toamasina ary kianja mitafo dimy ambin’ny folo afaka mandray mpijery arivo amin’ny Distrika samihafa any Mahanoro, Ampanihy, Vohémar, Ikongo, Maintirano, Betafo, Antsohihy, Ihosy, Manakara, Farafangana, Taolagnaro, Ambovombe, Fenoarivo-Atsinanana, Mandritsara ary Sambava.
Eo amin’ny lafin’ny Serasera sy Kolontsaina dia efamaro ireo asa fanatsarana ireo sehatra ireo ka ao anatin’izany ny fanombohan’ny fanamboarana fotodrafitr’asa sy ireo fampitaovana isan-tsokajiny. Ezahina ny hitohizan’ireo asa ireo amin’ity taona 2020 ity.
Natao ezaka manokana ny fanatsarana ny fandraisan’ny kaominina rehetra manerana ny Nosy ny haino amanjerim-bahoaka.
Fanorenana “Blocs techniques” miisa fito no tontosa tamin’ny taona 2019 tao amin’ireto Distrika ireto: Brickaville, Ambovombe, Ihosy, Ambositra, Manakara, Amparafaravola ary Malaimbady.
Narenina ihany koa ny birao sy ny toerana fampielezana sary sy feo an’ireo sampandraharahan’ny TVM/RNM amin’ireto Distrika ireto: Faratsiho, Ambatolampy, Mandoto, Toamasina, Vatomandry, Ambatondrazaka, Manandriana, Antsiranana I, Morondava ary Belo sur Tsiribihina. Efa vita tanteraka izany ankehitriny ary efa misitraka azy ny any amin’ireo toerana ireo.
Natomboka ny asa fanarenana sy fanatsarana toerana manan-tantara ao amin’ny Distrika enina ka misy amin’izy ireo efa notontosaina tamin’ny taona 2019. Ny Rovan’Antongona, ny Rovan’Ambositra, ny Vohitr’Ambohimanga, ny Maison Nathan ao Toamasina I, ny Manda ao Mahavelona, ny Trano nonenan’i Praiministra Rainilaiarivony ao Amboditsiry, ny Rovan’Ilafy, ny toeram-pitsarana eo Ambatondrafandrana Andohalo, ny Fasan-dRainiharo eo Isoraka ary ny Musée ao Moramanga no voakasika amin’ireo asa fanarenana ireo.
Efa mandeha ihany koa ny fanavaozana ireo vakoka ara-kolontsaina sy ara-tantara maro misy eran’i Madagasikara. Vakoka miisa iraika ambin’ny folo amin’ny Distrika samihafa no hotanterahana amin’ity 2020 ity. Ny didim-panjakana laharana 2020-350 tamin’ny 16 Marsa 2020 no mametraka ireo mpikambana ao amin’ny Komity Siantifika izay miara-miasa amin’ny Ministera misahana ny Kolotsaina amin’ny fanantaterahana ireo asa rehetra ireo. Tsongaina manokana amin’izany ny asa fanarenana ny Rovan’Antananarivo.
Efa tontosa koa ny fanorenana ireo Tranoben’ny Kolontsaina sy ny Fifandraisana (Maisons de la Culture et de la Communication) izay natomboka tamin’ny taona 2019 tao amin’i Distrikan’Antsiranana I, Mahajanga I, Toamasina I, Fianarantsoa I ary Toliara I.
Distrika maro no hisitraka ho an’ity taona 2020 ity ny fanavaozana sy famatsiana fitaovana eo amin’ny sehatry ny serasera ka roa amby ny folo sahady no hananganana “stations audio-visuelles” dia ny any Anosibe An’Ala, Ambatondrazaka, Mahabo, Antsirabe I, Brickaville, Taolagnaro, Ambovombe, Ihosy, Faratsiho, Ifanadiana, Miandrivazo ary Mahabo. Distrika folo hananganana “Pylônes” ahafahana miroso amin’ilay diffusion numérique dia ny ao Antanifotsy, Fianarantsoa, Ambositra, Mananjary, Toamasina, Ambatofinandrahana, Manakara, Ifanadiana, Toamasina I ary Morondava.
Tiako ny manentana ny mpiray tanindrazana ny amin’ny tokony hamehezan-tena eo amin’ny tsirairay mba tsy ho fitaovana fanelezana vaovao tsy marina, fanakorontanana ny saim-bahoaka amin’ny alalan’ireo tranga tsy voamarina eny amin’ireny tambazotra ireny.
Mankasitraka hatrany aho amin’ny fahatongavan-tsaina izay efa hita taratra eny amin’ireny tambazotra sosialy ireny ka betsaka no miezaka manitsy ny diso sy ny tsy marim-pototra.
Somary lavalava ny tatitra natao satria liana ahafantatra ny asa natomboka na efa vita isika mianakavy ary ny vahoaka Malagasy.
Misaotra anareo tokoa izahay fa ireo asa maro ireo no natomboka na efa vita sahady dia nisy ny fiaraha-miasa mba hampahomby ny fanarenana ary ny fampandrosoana an’i Madagasikara mamintsika.
Araka ny efa nanterin’ny Filohan’ny Repoblika ombieny ombieny, dia tsy misy Faritra na Distrika tsy hisitraka fotodrafitrasa sy ezaka fampandrosoana eto Madagasikara manomboka izao. Ary hataon’ny Governemanta fanamby ny fanantanterahana izany.
Ilaina ihany koa ny fahaizana mandrindra ny fientanana miaraka amin’ireo mpiara-miombon’antoka amintsika ireo. Izany zotram-pampandrosoana lalaintsika izany dia mametraka antsika eo amin’ny toerana izay tokony hanandratantsika hatrany ny maha-izy antsika Malagasy sy maha-izy an’i Madagasikara. Ny diplomasia Malagasy dia hanampy betsaka ny amin’izany ka izay no hanaovantsika ezaka manokana mba hanavaozana sy hanatsarana ny masoivohontsika any ivelany manomboka amin’ity taona ity.
Eto am-pamaranana dia manamafy ny fahavononan’ny Governemanta aho amin’ny fanohizana ny fanatanterahana ny fandaharan’asan’ny Politika Ankapoben’ny Fanjakana. Na dia eo aza ny fahasahiranana fanampiny entin’ilay valan’aretina COVID-19 dia mampanantena ny Governemanta manontolo fa hanao ny ainy tsy ho zavatra hanatanterahana ny vinan’Andriamatoa Filohan’ny Repoblika.
Misaotra indrindra anareo rehetra izahay nampiantrano sy nandray izao famelabelarana izao.
← Corona virus : “Ao anatin’ny fiombonana sy ny fifamenoana, ary fandalana ny soatoavina Malagasy no iatrehantsika ny ady atao amin’ny valan’aretina”
Conseil du gouvernement du Mercredi 1 er Juillet 2020 →